Isongo esandleni - kuba umhlobiso stylish kakhulu futhi imfashini, okuyinto ethandwa zonke izikhathi futhi kuwo wonke amazwe. Kungaba nhle isithombe ngasinye unikezwa kahle, kanti nokumphoqelela ukudlala imibala emisha. Kodwa kukhona izimo ngeshwa abalithandayo lapho kusonta isithombe futhi usinda. Ukuze lokhu bekungenzeki ukuthenga nesisekeli kumele ziphathwe kahle.
Isongo engalweni zingenziwa izinto ezihlukahlukene, phakathi kwabo -. Plastic, metal, ipulasitiki, ukhuni, ubuhlalu, ubuhlalu, ingilazi, kuze kudabuke umhlane, isikhumba, amatshe kanye nezinye canons imfashini ebizela othile kithi endleleni lapho yena kufanele ibe inkathi ethile. Nakuba kufanele akhethwe ikhumbula zonke izici ngomzimba wakhe siqu, ukuthungwa, izingubo, kanye umbala nezinye izesekeli.
Nge isihlakala ayizidlakela, ngeke ufune isongo omkhulu engalweni, kungcono uyeke kukhethwa imihlobiso ayisicaba elengayo eziningana. Kodwa abanikazi izandla mncane ingacosha imodeli ububanzi. Kulokhu, kufanele bona lizwakalise noma emibalabala.
Zithanda noma zingathandi, akudingekile ukugqoka ngesikhathi esifanayo obungafani obuningi - ezingeqi kwezingu-3 namasongo ngesitayela Imininingwane. Kodwa uma kuba okukhulu kakhulu futhi ebanzi - kungcono esandleni sakho, yena uzohlala kuvelela. Okungabalulwa isongo elincanyana phezu ingalo ngesimo izindandatho noma amaketanga.
Uma uza ngesikhathi izingubo ezifudumele, phezulu ijazi ijezi abagqoka isongo esime indandatho, okumele zigxilé esihlakaleni kanzima ngokwanele. Kusukela kufanele uyekwe uma sleeves phansi inwebe noma ahlotshiswe iyiphi lokubhalela.
Asikho isidingo kuhlangene oshibhile imigexo cocktail nakusihlwa sigqoka. Kulokhu, kungase kufaneleke namatshe ayigugu kuphela nezinsimbi, kungakhathaliseki isongo lapho ngesandla niyogqokani. Ngaphezu kwalokho, asikwazi kuhlangene ezishibhile ubucwebe amagugu.
Uma izingubo zakho kuhlanganisa imibala ehlukene, ukhethe isongo for phi of them. Ngokwesibonelo, uma egqoke ingubo ngemibala omnyama nomhlophe kanye predominance black - Sithathe izesekeli ezimhlophe, ukuze ukwazi ukudala umehluko.
Nge igqokela ebhishi kuyinto enhle iwashi isongo ezenziwe ngokhuni, bese ehlobo emoyeni ingubo plastic ephelele.
Namasongo ngesimo neketanga mncane ezibhekwa jikelele.
Uma ucabanga yokuthi lapho isandla egqoke isongo, kumelwe kukhunjulwe ukuthi ngokwesiko igqoke esihlakaleni kwesokudla. Uma sizigqoke ngezandla ezimbili, kufanele kuhlanganiswe nomunye.
Khetha inani elilungile ubucwebe - "hang" okuxekethile futhi ngakolunye uhlangothi akufanele. Okuhle kunakho konke ukuthi, uma mude kweyodwa isentimitha obungazungeza esihlakaleni.
Ungakhohlwa sihlanganise ubucwebe. Ukunquma ukugqoka entanyeni yakhe umucu amapharele, isongo zegolide kuyinto efiselekayo esikhundleni njengoba iparele. Ngu ezinkulu izindandatho plastic kanye namacici ukufanisa kungcono bangagqoki isongo nhlobo, ikakhulukazi ezandleni, lapho iringi. Futhi, abazigaxi izinto zesiliva nezinto zegolide, ngakho-ke, ngisho othandekayo kakhulu esiliva isongo kufanele kwesokunxele ekhaya uma benezindlebe amacici egolide. Namasongo nge namanzi ukuphrinta elikhanyayo kungenziwa kuhlangene namacici self-ezinemibala, ngoba lokhu ngeke babe nomuzwa wokuthi wena nigqoké kakhulu.
Teapot - prehistory nezinhlobo
"Ascona" (isiguqo): izibuyekezo, izithombe
Izikhwama Kipling. Njalo high yesimanje
Verano Phoenix Umkhaya kuyona 4 * e Side, Turkey
Ibhishi Legzira (Morocco) ukuceka?
Kukhethwa umlamuleli akhe phetho. Indlela ukubamba Pick
Izinyunyana Adversative - ikakhulukazi ukubaluleka kanye nokusetshenziswa
Pantothenic acid yendima yayo ekuqhubeleni umzimba womuntu
Blepharoplasty e Moscow, ikakhulukazi izinqubo kanye nokubuyekeza
Mezhresnichny tattoo iso: izibuyekezo, izithombe ngaphambi nangemva
Grigorovich, "Gutta-percha umfana": Isifinyezo imisebenzi